Ear Infections (နားလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Ear Infections (နားလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း)
Ear Infections (နားလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အအေးမိတဲ့အခါ၊လည်ချောင်းထဲ ပိုးဝင်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ဓါတ်မတည့်တာမျိုး ဖြစ်ပွားတဲ့အခါ နားရဲ့ အလယ်ပိုင်းမှာ အရည်လေးတွေ စုပုံပိတ်မိပြီး နားအတွင်းပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ နားအတွင်းပိုးဝင်ခြင်း ဟာ ကလေးတွေမှာ အဓိက ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး ရောဂါလက္ခဏာတွေအဖြစ် နားကိုက်တာ နဲ့ အဝါရောင်ခပ်ပျစ်ပျစ် အရည်လေးတွေ နားထဲကထွက်လာတာမျိုး ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ နား အလယ်ပိုင်းမှာ ရောင်ရမ်းနေတဲ့အပြင် အရည်တွေလည်း စုပုံနေတာမို့ နားအတွင်းပိုးဝင်ခြင်းဟာ နာကျင်လေ့ ရှိပါတယ်။
နားလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။
နားထဲမှာရှိတဲ့ ပြွန်လေးတွေ ရောင်ရမ်းပိတ်ဆို့ပြီး အလယ်နားမှာ အရည်တွေ စုပုံလာတာကြောင့် နားအတွင်းပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီပြွန်လေးတွေဟာ သေးငယ်ပြီး နား နဲ့ လည်ချောင်းအနောက်ဖက်ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ ပြွန်အသေးလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြွန်လေးတွေ ပိတ်ဆို့စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက
နှာခေါင်းနှင့် ဦးခေါင်းခွံကြား လှိုဏ်ခေါင်းပေါက် ပိုးဝင်ခြင်း။
adenoids ဂလင်းလေးတွေ ပိုးဝင်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ရောင်ရမ်းခြင်း။
ဘယ်သူတွေမှာ နားလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း ပိုဖြစ်နိုင်သလဲ။
နားအတွင်းပိုးဝင်ခြင်း ကို ပိုမိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက
အသက် ခြောက်လနဲ့ ၂နှစ် ကြားကလေးတွေ။
ရာသီဥတု ။ ဆောင်းတွင်းမှာ ပိုဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။
လေကောင်းလေသန့် မရတာ၊အိမ်မှာ လေဝင်လေထွက် မကောင်းတာ။
Ear Infections (နားလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ လက္ခဏာတွေက
• နားကိုက်ခြင်း (ရုတ်တရက် ဆစ်ခနဲ၊ဆစ်ခနဲ ကိုက်နေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်သလို ပူထူပြီး တောက်လျှောက်နာနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)။
• ရုတ်တရက် တခုခုနဲ့ ထိုးလိုက်သလို နာသွားပြီး နားထဲကနေ ပြည်နွေးနွေးတွေ ကျလာခြင်း။
• နားထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေသလို ခံစားရခြင်း။
• ပျို့အန်၊မအီမသာ ဖြစ်ခြင်း။
• နားကောင်းကောင်း မကြားရခြင်း။
• နားထဲက အရည်တွေ ထွက်ခြင်း စသဖြင့် ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေက
• နားထဲမှာ ဆို့နေခြင်း။
• ကောင်းကောင်း မအိပခြင်း။
• နားထဲက အရည်တွေထွက်ခြင်း။
• အစားကောင်းကောင်း မစားခြင်း။
• ညဖက် အိပ်ယာပေါ်လှဲထားရင် ငိုခြင်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နားလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေက ဘာတွေလဲ။
နားတွင်းပိုးဝင်တာ အများစုဟာ ရေရှည်ပြဿနာတွေ ဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခဏခဏ ဖြစ်တာ ဒါမှမဟုတ် ကြာရှည်ဖြစ်တာမျိုး ဆိုရင်တော့ အရည်တွေဟာ ကြာရှည်စွာ စုပုံလာနိုင်တာကြောင့် နားကောင်းကောင်း မကြားရတော့တာ၊စကားပြောနောက်ကျတာ ဒါမှမဟုတ် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးတာ၊ပိုးပျံ့နှံ့တာ နဲ့ နားစည်ပေါက်တာ အစရှိတဲ့ ဆိုးဆိုးရွားရွား နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
Ear Infections (နားလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မလဲ။
သင်ပြောပြတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေရယ် ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်လို့ရတဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေရယ်အပေါ် မူတည်ပြီး နားတွင်းပိုးဝင်တာလား၊တခြားရောဂါလားဆိုတာကို အလွယ်တကူ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန် အနေနဲ့ သင့်နားအတွင်းဖက်၊ လည်ချောင်းနဲ့ နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းတွေကို ကြည့်ဖို့အတွက် နားတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းလေးကို အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။
နားတွင်းပိုးဝင်တာကို ဖော်ထုတ်သိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ အထူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ နားတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းလေးတစ်ခု ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ဒီကိရိယာလေးကို အသုံးပြုပြီး ဆရာဝန်တွေဟာ နားအတွင်းပိုင်းကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ကာ နားစည်မြှေးအနောက်ဖက်မှာ အရည်တွေ ရှိမရှိ သိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ လုံလောက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ မရရှိသေးဖူးဆိုရင်တော့ သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ တခြားစစ်ဆေးမှုတွေကို ဆက်လက်ပြုလုပ်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-
ဒီစစ်ဆေးမှုဟာ နားစည်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို တိုင်းတာစစ်ဆေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နားစည်လှုပ်ရှားမှု ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကို တွက်ထုတ်မှာဖြစ်ပြီး သွယ်ဝိုက်သော အဖြေကို ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသံလှိုင်းသုံးပြီး စစ်ဆေးခြင်း(Acoustic reflectometry)
ဒီစစ်ဆေးမှုကတော့ စက်ကနေ လွှင့်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ အသံလှိုင်းတွေဟာ နားစည်က ဘယ်လောက်ပမာဏလောက် ပြန်ပြီး ကန်ထွက်လာနိုင်သလဲ ဆိုတာကို စစ်ဆေးတိုင်းတာ တာပဲ ဖြစ်ပြီး အလယ်နားမှာရှိတဲ့ အရည်ပမာဏကို သွယ်ဝိုက်တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
နားစည်နောက်ရှိအရည်ကို ဖယ်ရှား၊ စစ်ဆေးခြင်း (Tympanocentesis)
ပိုးဝင်တာဟာ ကနဦးကုသမှုတွေနဲ့ မသက်သာဖူးဆိုရင် နားတွင်းအရည်ထဲမှာရှိတဲ့ ကူးစက်ရောဂါပိုးကို အတိအကျ အမည်တပ်ထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီစစ်ဆေးမှုတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်ကလေးဟာ နားတွင်းပိုးဝင်တာ ဒါမှမဟုတ် အလယ်နားမှာ အရည်တွေစုပုံနေတာဟာ ကြာရှည်နေပြီဆိုရင် သင့်ဆရာဝန် အနေနဲ့ နားအထူးကုဆရာဝန်၊ စကားပြောခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာမှာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေဆီ လွှဲပြောင်းပေးပြီး အကြားအာရုံ၊စကားပြောနိုင်စွမ်း၊ဘာသာစကား နားလည်နိုင်စွမ်းနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိ မရှိတို့ကို စစ်ဆေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုးဆိုးရွားရွား နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်မလာခင်မှာ နားအလယ်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပိုးကူးစက်မှုကို ဖြေရှင်းကုသနိုင်ဖို့ဟာ ဆရာဝန်တွေရဲ့ ဦးတည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နားပိုးဝင်တာကို ဖြစ်စေတဲ့ နောက်ခံအကြောင်းရင်းကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားတာ၊ နားပြွန်လေးတွေထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို သတ်ပစ်တာ စတဲ့နည်းလမ်းတွေသုံးပြီး ကုသလေ့ရှိပါတယ်။
နားတွင်းပိုးဝင်ရောဂါကို ကုသရာမှာ Amoxicillin ဟာ အကျိုးသက်ရောက်မှု အင်မတန်ကောင်းတဲ့အတွက် သူ့ကို အဓိက ရွေးချယ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ Amoxicillin ဟာ ငွေကုန်ကြေးကျလည်း မများစေဘဲ နားတွင်းပိုးဝင်ရောဂါကို အများအားဖြင့် ၇ရက်ကနေ ၁၀ရက် အတွင်းမှာ လုံးဝပျောက်ကင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ Aspirin သောက်တာနဲ့ အာသီးဖြတ်တာတို့ကိုတော့ လုပ်စရာ မလိုဖူး၊မလုပ်သင့်ဖူးလို့ ဆိုပါတယ်။
Ear Infections (နားလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
အောက်ပါအချက်လေးတွေကို လိုက်နာပေးမယ်ဆိုရင် နားတွင်းပိုးဝင်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို လျော့ကျစေပါလိမ့်မယ်။
လူထူထပ်များပြားတဲ့ နေရာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ကလေးငယ်လေးတွေမှာ နို့သီးခေါင်းအတု၊ချိုလိမ် အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ပါ။
ဆေးလိပ်သောက်နေတဲ့သူတွေ အနားမှာ မနေပါစေနဲ့။
လိုအပ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို အချိန်မှန်မှန် လိုအပ်သလို ထိုးပေးပါ။
Understanding Ear Infection – Symptoms. http://www.webmd.com/cold-and-flu/ear-infection/understanding-otitis-media-symptoms. Accessed September4th , 2016.
Understanding Ear Infections: Diagnosis and Treatment. http://www.webmd.com/cold-and-flu/ear-infection/understanding-otitis-media-treatment. Accessed September4th ,
Ear infection (middle ear). http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ear-infections/home/ovc-20199482. Accessed September4th , 2016.
Ear Infections. http://www.healthline.com/health/ear-infections#Overview1. Accessed
မိဘများအတွက်လမ်းညွှန်, ကလေးကျန်းမာရေး, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း, ကျန်းမာရေးစင်တာ
ကိုယ့်ကလေး နားကိုက်ရင် ဘာတွေလုပ်ပေးမလဲ။ ။
Perichondritis (နားနှင့် အရိုးနုရောင်ယမ်းနာ )
History And Physical Exam For Low Back Pain (ခါးနာခြင်း ရောဂါရာဇဝင်နှင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း)